मेगा बैंकको ६५% हकप्रद भर्न ७ दिन मात्र बाकी, कहाँ जाने आवेदन भर्न ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » मेगा बैंकको ६५% हकप्रद भर्न ७ दिन मात्र बाकी, कहाँ जाने आवेदन भर्न ?
काठमाडौं - मेगा बैंकको ६५% हकप्रद भर्न अब ७ दिन मात्र बाँकी छ । असोज ३० गतेसम्म मात्र यो हकप्रदमा आवेदन दिन सकिनेछ । राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्याउने मिसनमा रहेको मेगाले भदौ २७ देखि १०ः६.५ अनुपातमा १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यको २ करोड ९७ लाख ८५ हजार ३४.६३ कित्ता सेयर बिक्री खुला गरेको हो । यसमा माघ ६ गतेसम्म कायम रहेका सेयरधनीले मात्र आवेदन दिन सक्नेछन् । मेगा र टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक मर्ज हुने सैद्धान्तिक सहमति भएपछि माघ ९ गतेदेखि बैंकको सेयर कारोबार रोक्का छ ।
नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंङ लिमिटेड नक्साल काठमाडौं र मेगा बैंकको केन्द्रीय कार्यालय राइजिङ मल काठमाडौं तथा यसका अधिकांश शाखा कार्यालयबाट हकप्रद सेयर भर्न सकिनेछ । नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंङबाट भने चेकमात्र बुझ्ने व्यवस्था छ । मेगाको बिक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंङ हो ।
हाल मेगाको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ५८ करोड २३ लाख १३ हजार रुपैयाँ छ । हकप्रद निष्कासनपछि मेगाको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब ५६ करोड ८ लाख १६ हजार ४८१.८१ रुपैयाँ पुग्नेछ । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा बैंकले ७९ करोड १४ लाख १३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । मेगाको प्रतिसेयर आम्दानी १७ रुपैयाँ १७ पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ १२७ रुपैयाँ ९७ पैसा छ ।
प्रकाशित : Tuesday, October 10, 2017